ထိုင်းနိုင်ငံသားများ အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့ - Yangon Media Group
ဘန်ကောက်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် တွဲဖက်အသုံးပြုပြောဆိုသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ပေါင်း ၈ဝ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် အဆင့် ၅၃ ၌ရှိသည်ဟု ဆွစ်ဇာလန်မှထုတ်ဝေဖြန့်ချိသော ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် စကားသွက်လက်စွာသုံးစွဲနိုင်မှုအညွှန်း စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
ယင်းအညွှန်းကိန်းများစာရင်းတွင် ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း သက်ကြီးလူဦးရေတစ်သန်းကျော်အား အင်္ဂလိပ်စာတတ်မြောက်မှုစွမ်း ရည်စစ်ဆေးမှုများ၏ အကဲဖြတ် ရလဒ်များမှတစ်ဆင့်တွက်ယူထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအရ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ပျမ်းမျှ ၄၉ ဒသမ ၇၈ မှတ် ဖြင့် အဆင့်နိမ့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အကဲဖြတ်ချက်အရမူ ၄၇ ဒသမ ၂၁ ရမှတ်ဖြင့် ၅၆ ဆင့်တွင်ရှိနေ သော ”အလွန်နိမ့်”အဆင့်ရရှိခဲ့ထားပြီး ယခုနှစ်တွင်တိုးတက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအကဲဖြတ်ချက်အရ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် စကားကို မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်သောနိုင်ငံများတွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ၇၁ ဒသမ ၄၅ မှတ်ဖြင့် ထိပ်ဆုံးတွင်လည်းကောင်း၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံက ၇ဝ ဒသမ ၄ဝ မှတ်ဖြင့် ဒုတိယ၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ၆၉ ဒသမ ၉၃ မှတ်ဖြင့် တတိယ၊ နော်ဝေနိုင်ငံက ၆၇ ဒသမ ၇၇ မှတ်ဖြင့် စတုတ္ထ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံက ၆၆ ဒသမ ဝ၃ မှတ်၊ ဖင်လန်နိုင်ငံက ၆၅ ဒသမ ၈၃ မှတ်၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံက ၆၄ ဒသမ ၅၇ မှတ်၊ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံက ၆၃ ဒသမ ၃၇ မှတ်နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံက ၆၂ ဒသမ ၃၅ တို့ ဖြင့် နိုင်ငံအသီးသီးအဆင့်လိုက် သတ်မှတ်ခံခဲ့ကြရသည်။
အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံများတွင် လာအိုနိုင်ငံသည် ၃၇ ဒသမ ၅၆ မှတ်ဖြင့်အောက် ဆုံးသို့ရောက်ရှိနေပြီး အီရတ် ၃၈ ဒသမ ၁၂ မှတ်၊ လစ်ဗျား ၃၈ ဒသမ ၆၁ မှတ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၄ဝ ဒသမ ၈၆ မှတ်နှင့် အယ်လ် ဂျီးရီးယား ၄၂ ဒသမ ၁၁ မှတ်တို့ ဖြင့် လာအိုအထက်တွင် အဆင့် အသီးသီးရှိခဲ့ကြသည်။ အာရှနိုင်ငံများတွင် စင်ကာပူသည် အမှတ်အမြင့်ဆုံးဖြင့် အဆင့်တစ်၊ မလေးရှား ၁၃၊ ဖိလစ် ပိုင် ၁၅၊ အိန္ဒိယ ၂၇၊ ဟောင် ကောင် ၂၉၊ တောင်ကိုရီးယား ၃ဝ၊ ဗီယက်နမ် ၃၄၊ တရုတ် ၃၆၊ ဂျပန် ၃၇ နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ၃၉ အဆင့်အသီးသီးတွင်ရှိကြသည်။
ပညာရေးတွင် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သော်လည်း တတ် မြောက်မှုတုံ့နှေးနေသော နိုင်ငံများတွင် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မွန်ဂိုလီးယားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းရှိဆရာ၊ ဆရာမများ မရှိသောပြဿနာများကြောင့်ဖြစ်ရသည်။ စင်ကာပူသည် အင်္ဂလိပ်စာအကောင်းဆုံး အာရှ ၁ဝ နိုင်ငံတွင်ပါဝင်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဂိုချောက်တောင်သည် ၂ဝဝဝ ပြည့် နှစ်မှစတင်ကာ အင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်စွာ ပြောတတ်စေရေး အစီအစဉ်များနိုင်ငံတွင်း စတင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ၁ဝ နိုင်ငံဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးတိုးတက် စေရေးအတွက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှ စကာဆရာ ၁၅ဝဝဝ ကို မွမ်းမံသင်တန်းများပေးခဲ့သည်။ တစ် ကြိမ်လျှင် ခြောက်နာရီကြာကာ တစ်လကြာသင်ရိုးဖြင့် နှစ်လုံး ပေါက်သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
တပ်သားသစ်များကို မသင့်လျော်သော စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများပေး၍ အမေရိကန် မရိန်းတပ်မှ သင်တန်းဆရ?
ဗြိတိန် နုတ်ထွက်သွားသောကြောင့် အီးယူ အသင်းဝင်ကြေး ဂျာမနီ ပိုထည့်ရမည်
“ကျားကျားကြိုက်ကြိုက်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီရုံတင်မည်
G Fatt က ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်တာကြောင့် သူရေးပေးတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ဆိုရတာ အဆင်ပြေပါတ?
မြန်မာလုပ်သား၂ဝ ကားမီးလောင်သေဆုံးခဲ့သည့် နေရာတွင် ထိုင်း-မြန်မာအာဏာပိုင်များ အမျှအတန်းပေ?